Isabella Arantes: Nyeredzi yeBrazil inokunda nyika | TeraNews.net
Isabella Arantes: Nyeredzi yeBrazil inokunda nyika
Munyori Tera nhau Yakabudiswa pa 12.04.2019
Magazini akasvibisa haasisiri mumamiriro - kuti ave ane mukurumbira, ingoisa Instagram uye unokwevera kutarisa kwevanhu. Ndozvakaitawo novice muenzaniso Isabella Arantes (Isabella Arantes) anobva kuBrazil. Musikana anoburitsa ake mafoto uye zvekushandisa nezve fashoni.
Sezvo anyoresa mu2013 mune zvishoma-inozivikanwa panguva iyoyo social network, Isabella akawana 2019 50 chaiyo vanyoreri ne 000 gore. Nyeredzi yeBrazil zuva nezuva inoisa mapikicha pasocial network uye inogovera zvaanoona nezvezvipfeko. Kunyanya, iyo fashionista inomiririra iyo La Bella brand, iyo yakarongedzwa mukugadzirwa kwekupfeka underwear.
Isabella Arantes: hupenyu hwega
Iyo modhi yakazvarwa pa29 munaJune 1997 yegore (iye ari 21 gore). Zvinoenderana nehorodho - cancer. Nzvimbo yekuzvarwa uye yekugara - Brazil. Zvekuvaraidza - kutamba. Izvo zvinozivikanwa kuti nyeredzi yeBrazil yaive chikamu cheboka rekutamba Domingao do Faustao. Chimiro chemuchato - kwete kuroora. Kana iwe uchidavira venhau, Isabella Arantes akachekwa nerunako rwake iye anozivikanwa muBrazil mutambi wenhabvu mutambi - Neymar da Silva. Mune iyo albha yemufananidzo pa Instagram, mune "chaiye" chikamu, pane mifananidzo yaIsabella aine muzukuru wake chete.
Chinhu chikuru chinowanikwa mari pasocial network. Iro guta guru remuenzaniso iri vangangoita 100 zviuru zvemadhora. 2019 gore raIsabella rakabudirira. Muenzaniso wacho waive pakati pevasikana gumi vakanaka kwazvo pasheni. Stylists vanopokana kuti nyeredzi nyowani kubva kuBrazil ine ramangwana rakanaka.
3D Printer - chii icho, nei ichidikanwa
MaWatchwatches uye akasimba mabhandira haana kufarirwa sezvatinofunga
Nei uchifanira kutenga chishandiso chehunyanzvi
Smart wachi Kospet Optimus 2 - inonakidza gadget kubva kuChina
Kuvaka dziva - zviripo, maficha, iro dziva riri nani
IIIF150 R2022 smartphone - mota yakashongedzerwa pazviitiko zvese
Ugoos AM7 Smart TV - kutengesa kwatanga
Apple iPhone 13 - mamodheru, mutengo, pikicha, zuva rekuratidzira
Apple iPhone 11: kuenderera kwemutsara wemafoni
VONTAR X88 Pro: pamusoro, mamiriro
Mining cryptocurrency pane SSD uye HDD